Markab ee Nuux. BNL Ministries - so40
Ilaah iyo Taariikhda Taxanaha.
Location of Markab ee Nuux.
Daraasado badan waxay isku dayeen in ay helaan Markab ee Nuux, oo ay ku jiraan tiro ka mid ah kuwaas oo sheegay in ay soo helo, laakiin waxaa lagu soo bandhigay in uu been abuur yahay.
Baybalka ayaa sheegay in... “Oo bishii toddobaad, maalinteedii toddoba iyo tobnaad, ayay doonnidii ku fadhiisatay buuraha Araarad.” Bilowgii 8:4.
Aayadda 5 sii wadaan, “Biyihiina way sii dhinmayeen ilaa bishii tobnaad. Bishii tobnaad, maalinteedii kowaad, ayaa buuraha dushoodii la arkay.”
Isla mar Ark u yimid in ay nastaan, Mt Ararat ma ahayn volcano in uu yahay maanta. Sababta bayaankan waa in buuraha aan la arki karin ilaa 2 bilood iyo badh ka dib. Laga soo bilaabo meel ay ku nastaan Markab ee Nuux maanta, Mt Ararat, oo taagan 16945ft oo ka sarraysa heerka badda, si cad ayaa loo arki karaa.
Laga soo bilaabo bannaan Mt Ararat waa mid cusub oo ka sii badan buuraha la dhisay on. i.e. Buuraha ku hareereysan waxaa laga soo dhejiyay ka soo qulqulaya, Mt Ararat waa volcanic.
Kitaabka Quduuska ah ma uusan sheegin Markab ee Nuux waxay ku nasan jirtay Mt Ararat, laakiin buuraha aaggaas.
Goobta meeshaas intiisa kale Markab ee Nuux waa qiyaastii 30 kiiloomitir koonfur ah Mt Ararat, u dhow soohdinta reer Turkey iyo Iran, oo aan ka fogeyn tuulo la yiraahdo Gungören. Tan waxaa aqoonsan dowladda Turkiga sida site Nuux, oo waxaa jira calaamado waddo oo tilmaamaya tan. (Nuh's Ark). "Nuh" waa magacii reer Kaldayiin (Baabiliyaanka) Nuux.
Markab ee Nuux?.
Isku-dubaridada hal dhinac ee shayga.
Baarista goobta Markab ee Nuux.
Magnetometer waa qalab cabbira field magnetic dhulka. (Waxaa sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa si aad u heshid submarines biyo hoostiisa, halkaa oo ah meelo birta ah, isbedelka field magnetic wax yar, u oggolaanaya goobta inay dhacdo.)
Imtixaanada Magnetometer qaadeen on agagaarka goobta Markab ee Nuux, muuji anomalies, muujinaya in birta ay jirto.
Imtixaanadaan waxay tilmaamayaan marka isbeddelka cufnaanta ay dhacaan. Tani waxay muujinaysaa qaab joogto ah, khadadka siman, iyo khadadka iskutallaabta, sida waxa laga filan karo laga bilaabo qoryaha buluuga ah iyo qiiqa dhismeedka doon oo kale ah.
Imtixaanka tijaabada Core.
Imtixaanka tijaabada Core Qaar ka mid ah ayaa muujiyey joogitaanka alwaaxdiisa fossilized, qaybo ka mid ah antler deerada, oo ay la socdaan timaha in la aqoonsaday sida lahaanshaha bisad, (Leopard) taas oo aan hooyo ka mid ah aagga. ciddiyaha Waxaa sidoo kale fossilized in ay yihiin square qaab. Waxaa la rumeysan yahay, kuwaas oo ay mas'uul ka yihiin loogu talagalay akhriska magnetometer ee la helay.
Isbarbardhigyada ayaa la sameeyay of sawiro anteenada qaaday on booqasho kala duwan. Kuwani waxay tilmaamayaan in dhulka ku hareereysan ayaa hoos u dhacaya buurta. Qaybta Ark ee sawiradan, si kastaba ha ahaatee, ma aysan dhaqaaqin, iyo sidoo kale noqdaan more muujiyey. The bulk iyo size of qaab-dhismeedka wuxuu si joogta ah ugu haynayaa booska.
Doonnida dhererkeeda uu yahay 515 ft 6 inches. Cabbirka Markab ee Nuux sida ku xusan Kitaabka Qudduuska ah, Bilowgii 6:15, “Waa inaad sidatan u samaysid iyada: doonnida dhererkeeda waxaad ka dhigtaa saddex boqol oo dhudhun, ballaadhkeedana waxaad ka dhigtaa konton dhudhun, sarajooggeedana waxaad ka dhigtaa soddon dhudhun.” Cabbirkani waa mid sax ah, haddii dalka Masar Royal dhudhun (524mm) waxaa loo isticmaalaa, si loo xisaabiyo dhererka.
Dhagaxyo barroosinka - Xasilinta.
Aan ka fogayn meeshii kale ee Markab ee Nuux waxaa jira tiro dhagaxyo ah, in line si caddaalad ah oo isku xigta. Kuwan waxaa ku tilmaamay sida dhagaxyo barroosinka.
Dhagax barroosinka waa dhagax weyn, ballaaran ee hal jiho, cidhiidhi ah ee kale. Waxay leedahay dalool xagga sare, taas oo u ogolaato in la xidhan xadhko. Tiro ka mid ah kuwaan wuxuu xasilin lahaa markabka, ee barafka weyn in laga yaabo in la filayo. Waxay yihiin cagaha badan ee dhererka (8 ama ka badan), wax badan ka weyn dhagaxyo barroosinka in sida caadiga ah laga helo.
Kuwani sidoo kale waa mayl badan (75ml ama ka badan) laga bilaabo badweynta ama badda.
Nuuxna wuu sii dayn lahaa iyaga, si ay u oggolaadaan in sanduuqu u fuulaan biyaha sare, ka hor inta aysan imaanin istaagid.
Nuqul ka mid ah Markab ee Nuux.
Waxaa jira replica a size ka buuxa Nuux Ark at Museum Abuurista, ee America.
Tani waxay muujinaysaa hababka dhismaha suurtogalka, waayo, markab in uu yahay waxan weyn.
Dhismaha Ark nuqul.
Markabka casriga ah.
Cabbir la mid ah.
Model Ark Imtixaanka.
Webmaster wuxuu leeyahay...
Boggani wuxuu ubaahan yahay baaritaan dheeraad ah, la qodaya soo baxay isagoo tallaabada xigta, si loo go'aamiyo sababta loogu talagalay cabirada xiisaha leh ee la helay. Tani ma la oggolaan doonin dowlada Turkiga iyada oo aan lahayn dabool joogto ah goobta.
uusan xukumi dembigeena,
wuxuu noqon lahaa
waajib si kor loogu
qaado Sodom iyo Gomora
oo raali geliyaan
Oo Ilaah wuxuu xusuustay Nuux, iyo wixii noolaa, iyo xoolihii doonnidii kula jiray isagii oo dhan; oo Ilaah dabayl buu dhulka dul mariyey, biyihiina way dhinmeen;
ilihii moolka iyo dariishadihii samaduna way awdmeen; roobkii samadana waa la joojiyey;